Handan Yongnian Zhanyu fastener Manufacturing Co., Ltd. bụ usoro nke imewe nkesa nke ọma, mmepe onwe onye nke ebu, nrụpụta, ire ahịa, ọrụ na otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Handan Yongnian Zhanyu fastener Manufacturing Co., Ltd. bụ usoro nke imewe nkesa nke ọma, mmepe onwe onye nke ebu, nrụpụta, ire ahịa, ọrụ na otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. The ụlọ ọrụ nwere ya ime ihe otu, nwere ike onwe-amalite a dịgasị iche iche nke nnukwu na obere p ...
Na Jenụwarị 5, 2021, Yongnian District Grand Theater nwere 2020 Yongnian District Economic Work Conference na ndị ọchụnta ego onwe ha ịja mma na ogbako.
Na Jenụwarị 5, 2021, Yongnian District Grand Theater nwere 2020 Yongnian District Economic Work Conference na ndị ọchụnta ego onwe ha ịja mma na ogbako. Cui Yafeng, onyeisi oche nke ụlọ ọrụ Zhanyu, merie aha nke ọmarịcha ọchụnta ego na Yongn ...
On December 10, 2020, anyị ji obi ụtọ na-eme omume na mbugharị nke Zhanyu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ center na ẹkụre na ojiji nke 7000 square mita nkwakọba.
On December 10, 2020, anyị ji obi ụtọ na-eme omume na mbugharị nke Zhanyu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ center na ẹkụre na ojiji nke 7000 square mita nkwakọba. Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ Zhanyu nọ na-agbaso ozi nke iru ndị ahịa na ndị ọrụ, na ịgbaso ...